Archive du 09-août-2021
Rivo Rakotovao “Potika foana ny firenena rehefa mandray fahefana ireo”
Namondrona ireo mpikatroka ao aminy tany Toamasina Renivohitra sy Fenoarivo Atsinanana ny antoko HVM ny faran’ny herinandro teo. Mbola misy ny mpikambana ao anatin’ny Antoko HVM
LALAO OLAIMPIKA ANY FRANTSA INDRAY AMIN’NY 2024
Nifarana tanteraka omaly 8 aogositra ny lalao olaimpika notanterahina tany Japon nanomboka ny 13 jolay. Ny medaly volamena mamaritra ny filaharana ny filaharana ka voalohany I Etazonia nahazo 39
Rehefa maheno ny Filoham-pirenena ankehitriny miresaka, dia hita taratra ary tena miharihary ny maha olon’ny serasera azy.
Fikasana hamono ny Filoha Misy mpanao politika ambony tafiditra
“Ataoko fa ny zavatra nitranga saika hatao teto amin’ny firenena, dia efa mihoatra ny fefy, tsy azo leferina, mamoafady,…
Resy ny covid-19 andiany faharoa Foana ny “couvre feu”, hisy sidina 4 avy any Paris
“Hita fa efa resintsika ny covid-19 andiany faharoa. Nanahy isika hoe ho sanatrian’ny vava ho toy ny tany Inde. Na nisy aza ny lavo,
Rodoben’ny mpanohitra “Harenanay ny tsy fitovian-kevitra”
Nanatontosa fanadiovana faobe tetsy amin’ny kianjan’ny finoana etsy Behoririka ny sabotsy teo ny avy eo anivon’ny Rodoben’ny mpanohitra ho an’ny demokrasia eto Madagasikara na RMDM
Fidangan’ny vidin’entana «Ao anatin’ny 3 andro tsy maintsy misy vahaolana”
Tokony hisy ny fisondrotana saingy tsy mihoampampana no hita eny amin’ny fiarahamonina. Misy ny fanararaotana ataontsika samy Malagasy, fiakaran’ny saram-pitaterana an-dRanomasina.
Fitateram-bahoaka Sao dia tokony averina ilay fanofanana mpamily sy resevera ?
Matetika no handrenesana lozam-pifamoivoizana ka tafiditra ao anatin’izany ireo fiara fitateram-bahoaka dia ny Taksibrosy sy Taksibe.Ity farany no andeha ho resahana.
Sendika SVS- Asa fivelomana Mila havaozina ireo lalàna efa lany andro
Miisa 388 ireo andininy ao anatin’ny lalàna mifehy ny asa eto amintsika ankehitriny. Ny mampalahelo anefa raha araka ny fanazavan’Atoa Barison Rakotomanga,
Vidin-tsaribao Tsy nahazo intsony 100 Ar, lasa 500 Ar ny famarana
Tsy mitsahatra ny miakatra ny vidim-piainana eto amintsika. Ankoatra ireo kojakoja ilaina amin’ny fiainana andavanandro toy ny menaka….
Abel Anicet Mety hilalao any Israely
Fanaraha-maso hatreto no tena heno fa ataon’ireo klioba vahiny liana amin’ny kapitenin’ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra, Abel Anicet, taorian’ny fahataperan’ny fifanarahany tamin’ny klioba bolgara,
Hery Bastien nindramin’ny Derry City FC Lalao miisa 2, fandresena 2 hatreto
Azo lazaina ho mbola fahombiazana hatreto ny nindraman’ny klioba divizionina voalohany ao Irlandy avaratra dia ny Derry City FC an’ilay Malagasy milalao ao amin’ny Bohemian FC, Hery Bastien.